Verdinas nemaprawuni - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Muriwo791 maminitsi2 vanhu450 makarori
Aya ma verdinas ane prawns ndeyechokwadi platazo izere nekuravira iyo yauri kuzonakidzwa nayo nerunako. Yakakwana kuti unakirwe mukupera kwesvondo uchibika chaiwo mabikirwo eedu gastronomy.
Nyemba zviri nyore kwazvo kubika, kunyangwe iwe uchifanira kuve nechokwadi chekuti iyo mbishi zvinhu zviri zvemhando yepamusoro kuitira kuti mhedzisiro yacho ive yakanaka, bhinzi yakazara izere nekuravira.
Iyo, pasina mubvunzo, nzira yekubika yakapusa uye yechinyakare senge idzo dzakagadzirwa nambuya vedu vanodyisa muviri uye vanonyaradza mweya.
1 Verdinas ine prawns
2 Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve ma verdinas ane prawns?
2.1 Chinja iyi yekubheka kune yako Thermomix modhi
Chikafu chinonaka chauchanakidzwa nacho mabikirwo echinyakare.
Recipe mhando: nyemba
Nguva yekugadzirira: 12H
Kubika nguva: 1:11 p.m.
Nguva yakazara: 13:11 p.m.
40 g mafuta
500 g yemvura yemhando yepamusoro
250 g yemazera
1 diki hanyanisi
100 g yemvura yemhando yepamusoro
Zuva rapfuura tisati taisa miriwo mundiro uye tichivhara nemvura yakawanda. Tichavarega vachinyorova pakati pemaawa masere negumi nemaviri.
Mangwana acho, tinosvuura matinji achisiya muswe kuti arege kuparara.
Isu tinoisa misoro nematehwe mugirazi, kuwedzera mafuta uye kubikira Maminitsi mashanu, 5º madhigirii, kumhanya 120.
Tinowedzera mvura uye munyu une runyoro. Isu tinoronga Maminitsi mashanu, tembiricha 15º, kumhanya 100.
Mushure menguva, simbisa iyo stock kuburikidza neyakaonda mesh strainer uye chengetedza.
Tine bepa rekicheni tinobvisa zvisaririra zvegirazi kubva mugirazi asi tisina kugeza kuti tirege kurasikirwa nechinhu chemuto.
Isu tinorasa mvura kubva mumiriwo uye tonyatsoidurura zvakanaka. Isu tinoaisa mugirazi neiyo yakachena hanyanisi, karoti uye leek uye zvidimbu zvakakura. Isu tinowedzera 100 g yemvura uye chirongwa Maminitsi gumi nemashanu, 5º, chipunu kumhanya, kuruboshwe.
Kana mvura ichipisa, wedzera stock kusvika wavharwa uye chirongwa Maminitsi gumi nemashanu, 40º, chipunu kumhanya, kuruboshwe.
Panguva yekubika isu tinotarisa ma verdinas kuti arege kupera muto.
Kana iyo verdinas yatove nyoro, tinovadzvinyirira zvakanyanya kuitira kuti vasatsemuka. Saka tichava nema verdinas kune rimwe divi uye muto kune rimwe.
Isu tinodzosera muto mugirazi pamwe chete neeek, karoti uye hanyanisi. Tinopwanya panguva 1 miniti, kumhanya 10. Kana tikaona kuti rave gobvu tinogona kurideredza nekuwedzera mamwe stock.
Wedzera ma verdinas uye wedzera iwo akachekwa maprawuni atakange tachengeta kubva pakutanga. Tinobikira Maminitsi gumi nemashanu, 5º, chipunu kumhanya, kuruboshwe.
Isu tinopatsanura ma verdinas nemapondo mumahwendefa akadzika uye tinoshanda ipapo
Zvinogoneka kuti panhanho ye8 uchafanirwa kuwedzera nguva. Rangarira kuwedzera stock uye kuronga iyo nguva yaunofungidzira, iine tembiricha yakafanana uye nekumhanyisa. Usakanganwa kutendeuka kuruboshwe.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve ma verdinas ane prawns?
Verdina imhando ye bhinzi chaiyo kubva kuAsturias uye izvo zvinokurirwawo mu Iyo Mariña Lucense. Iyo inoshandiswa pamusoro pezvese kugadzirira nehove uye shellfish, ingave yakavhenganiswa kana chete nemapondo, mapundu, prawns ...
Iwe unozozvisiyanisa zvakanaka kubva kune mamwe akasara mabara nekuti ndizvo diki, yakati sandara, ine ganda rakatsetseka uye neruvara rwakanaka rwegirini chinova ndicho chinonyanya kuratidza.
Kuti ivo vakasvibira hazvireve kuti ivo vatsva, chete kuti vakaunganidzwa vasina kukura kana vachinge vaine hura hwakawanda ndosaka vane vara rinokatyamadza kudaro.
Muchokwadi, ma verdinas anotengeswa akaoma uye, kuti uwane iwo, uchafanirwa kuenda misika uye zvitoro zvine hunyanzvi kana kuzvitenga online.
Sezvo zvaoma iwe uchafanirwa kuzvinyudza kweanoda kusvika maawa masere. Uye rangarira kuti nguva yekubika inoenderana nekuti vanga vaomesa kwenguva yakareba sei, ndiko kuti, ivo vakuru ivo, ivo vanowedzera maminetsi avanoda.
Sezvandambotaura, unogona kuvaperekedza nemhando dzakasiyana dzehove uye zvegungwa. Ini ndinowanzo gadzirira navo kamba kana kuti kamba. Iyo prawn ine yakanyanya kusimba flavour uye iyo prawn ine nyama yakawanda asi chero eaya maviri anoenda zvakanaka neresipi.
Zvese prawn uye prawn vanobika nekukurumidza zvakanyanya saka ndisati ndawedzera ini ndinokuraira kuti uve nechokwadi chekuti ma verdinas agadzirira.
Rangarira izvo zvinogona kutora nguva yakati rebei kupfuura zvakaratidzwa muresipi. Iwe unongofanirwa kuvapuruzira uye nekuvapa imwe nguva yakati wandei uye iwe uchaona kuti iwe unowana sei iyo yakakwana poindi izere nekuravira.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Dunhu Cuisine, Muriwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Dunhu Cuisine » Verdinas ine prawns
Sliced ​​chingwa nemafuta ezuva
Nyama cannelloni ine piquillo muto